သင့်ရဲ့ 30 မိနစ်နေအိမ်စီးပွားရေးစီမံကိန်း | စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
သင့်ရဲ့ 30 မိနစ်နေအိမ်စီးပွားရေးစီမံကိန်း
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > အကွောငျး > သင့်ရဲ့ 30 မိနစ်နေအိမ်စီးပွားရေးစီမံကိန်း
ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လာတဲ့အခါကိုယ့်အစိုင်အခဲရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, ကောင်းစွာအတွေးထွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်. ငါအတူတူငါဘဏ်ချေးငွေလျှောက်ထားဖို့အသုံးပြုတဲ့ကြမ်းတမ်းတစ်ပစ်ချ (ငါမရခဲ့, စကားမစပ်). ခြောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်စေမယ့်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဒီအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်၏ငါတွေ့ဖူးတဲ့. ဒါဟာတာရှည်မကျြနှာရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ဖြည့်စွက်ရန်သင့်အားနေ့ရကျကာလကိုယူမထားဘူး. ငါအမြန်ဖန်တီးပါတယ်အောက်တွင် 30 မိနစ်စီးပွားရေးစီမံကိန်း. A ကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြေပြင်ကိုချွတ်ရကုန်ကျမည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အဘယျသို့ထွက်တွက်ဆကူညီပေးပါမည်. သင်ဤမှာခန့်မှန်းချင်ကြပါဘူး. သင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုသိရှိသင်အားသွင်းဖို့တာပေါ့အဘယျအဆုံးဖြတ်ကိုကူညီလိမ့်မယ်. အဆိုပါ 30 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမိနစ်စီးပွားရေးစီမံကိန်းလည်းသင့်ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်. သူတို့ကိုအကြောင်းမေ့လျော့မနေပါနဲ့. တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားခုနှစ်တွင်သူတို့တည်ရှိနေနှင့်သင်သည်ထိုသူတို့သိမှရချင်တာပေါ့. အဓိကအချက် ‘ သူတို့တစ်တွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းစာလုံးပေါင်းထွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပျက်ကွက်. ကအမှားလုပ်မနေပါနဲ့. ခဏအဘို့အစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်ရပြီအဘယ်သူသည်သင်တို့အဘို့အသူတို့အား, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဒီအစီအစဉ်ကိုသင်မကူညီနိုင်မစဉ်းစားကြဘူး. သင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုပုံမှန်ထွက်ယူသင့်ပါတယ်, reread နှင့် updated. သင့်ရဲ့ 30 မိနစ်နေအိမ်စီးပွားရေးစီမံကိန်း 1. သင့်လုပ်ငန်းအတိအကျကဘာလဲ? တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစာကြောင်းများအတွက်ရှင်းပြပါ. (သငျသညျစာကြောင်းများ၏စုံတွဲတစ်တွဲ၌သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖော်ပြရန်မနိုင်လျှင်, သင့်လုပ်ငန်းအားပြန်လည်စဉ်းစားနှင့်သင်၏စိတ်ကူးအာရုံစူးစိုက်). 2. သင့်ရဲ့အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်? သငျသညျဒါကြောင့်ထင်ပါစေသောအကြောင်းရင်းများစာရင်း. 3. သငျသညျတစျနှစျ၌သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြင်ဘူးအဘယ်မှာရှိ? သုံးနှစျမြားတှငျ? ငါးနှစ်အတွင်း? (သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိကြလော့။) 4. ဘယ်လိုသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရန်ပုံငွေလိမ့်မည်? စုထားသောငှေ, ခရက်ဒစ်ကတ်များ, ချေးငွေများ? 5. သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်ဖို့ဘာပစ္စည်းကိရိယာများ / ရုံးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ / လိုင်စင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်? စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်? 6. အဘယျသို့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကုန်သွယ်မှုစာပမြေားကိုသင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်? စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်? 7. သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ဖောက်သည်သူကားအဘယ်သူ? သူတို့ကိုကိုဖော်ပြရန်. 8. တခြားဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်လိမ့်မည်? 9. အဘယျသို့သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွဲပြားစေသည်? (စျေးနှုန်း Include, အရည်အသွေး, ထူးခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကို, စသည်တို့ကို) 10. သငျသညျသငျ့အိမျရုံးဘယ်မှာတက်ထားမည်? တကကောင်းတဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်သောရုံးစေရန်ငါ့ကိုပိုက်ဆံကုန်ကျမယ်? ပေးရ? 11. သငျသညျနေ့စဉျသို့မဟုတ်တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ် daycare အသုံးပြုလိမ့်မည်? ပေးရ? 12. သငျသညျအကြှနျုပျ၏မိသားစုရှင်သန်ကိုကူညီတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လအောင်ငွေမည်မျှလိုအပ်ပါဘူး? နောက်ထပ်တစ်ခါ, ဒီရုံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစာရင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့လုံလောက်တဲ့မေးခွန်းများကိုဤနေရာတွင်သင်အသစ်တစ်ခုကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်နေရပါလိမ့်မယ်အရာ၏အကောင်းတစ်စိတ်ကူးပေးပြီးပါဝင်ပတ်သက်ကုန်ကျစရိတ်ဖို့ရှိပါတယ်. တစ်ဦးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုသင့်ရဲ့အောင်မြင်အိမ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်. တဦးတည်းကြီးမြတ်ကိုးကားပြောပါတယ်အဖြစ်, စီစဉ်ရန်ပျက်ကွက်သူများသည်, ကျရှုံးဖို့အစီအစဉ်. ‘ သင့်ရဲ့အမည်မသိစာရေးသူ 30 မိနစ်နေအိမ်စီးပွားရေးစီမံကိန်း
･ Your 30 မိနစ်နေအိမ်စီးပွားရေးစီမံကိန်း
categories: အကွောငျး, အားလုံး, ကမ်း, စီးပွားရေးစီမံကိန်း, ဖန်တီး, တစ်ဦးကစီးပွားရေး Create, အကြွေးဝယ်ကဒ်, E-စီးပွားရေး, focus, မူလစာမျက်နှာစီးပွားရေး, HR, စိတ်ကူး, LINE, စာရင်း, ခြေးငှေ, အဖှဲ့အစညျး, စီမံကိန်း, မေးခွန်း, ဝန်ဆောင်မှု, အောင်မြင်ခြင်း, ကုန်သွယ် Tags:: အကွောငျး, အတတ်ပညာ, ကမ်း, ဘဏ်ချေးငွေ, အကျိုး, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, စီးပွားရေးအစီအစဉ်, ကွောငျ, ကုမ္ပဏီ, ဖန်တီး, createabusiness, အကြွေး, အကြွေးဝယ်ကားတစ်စီး, အကြွေးဝယ်ကဒ်, ခရက်ဒစ်ကတ်များ, E-စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, အာရုံ, နေအိမ်, အိမ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, နာရီ, စိတ်ကူး, စိတ်ကူးများ, အလုပ်, လိုင်း, စာရင်း, ခြေးငှေ, ချေးငွေများ, အစည်းအဝေး, ပိုက်ဆံ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်, အကယ်., အဖှဲ့အစညျး, ပါတီ, စီမံကိန်း, ကုန်ပစ္စည်း, စီမံကိန်း၏, မေးခွန်း, quiz, စြေးထား, ငှားရန်, အစီရင်ခံစာ, ရောင်းအား, ဝန်ဆောင်မှု, န်ဆောင်မှု, ဝေစု, ဖြေရှင်းချက်, အောင်မြင်ခြင်း, ပစ်မှတ်, နည်းပညာကို, ကုန်သွယ်, အနိုင်ရ, အလုပ်, အလုပ်လုပ်ကိုင်
တစ်ဦးမြတ်သောမိခင်ရဲ့ Day ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်အကြံပြုချက်များ
silicone လက်ကောက် 101
စည်းစိမ်ဥစ္စာမှ Big လက်မှတ်နေသော, ကာဗွန်မိတ္တူ Pro ကို, ဥစ္စာဓနမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, စည်းစိမ်ဥစ္စာမာစတာနိုင်ငံတကာ, EDC-ရွှေ, နှင့် Liberty လိဂ်?
ငါသည်တ Business Plan လိုအပ်မနေပါနဲ့…ငါလုပ်ပါ?
စီးပွားရေး Card များကိုပေးခြင်း၏အနုပညာ
Celebrity ဝါသနာရှင်ဆိုဒ်များတွင် Advertising ကြော်ငြာ
အပိုဒ် Directory ကိုဖြန့်ဖြူးသည်ဆောင်းပါးများပြင်ဆင်နေ
အွန်လိုင်းမူလစာမျက်နှာစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ: အဆိုပါကိုးကား Check
Pre-ပိုင်ဆိုင် Semiconductor ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းဝယ်နိုင်ဘို့သိကောင်းစရာများ
ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများထမ်း Options ကိုအလေးချိန်